iPhone 12 Pro Max vs OnePlus 9 Pro: Fampisehoana, bateria, endri-javatra ary maro hafa | Vaovao IPhone
iPhone 12 Pro Max vs OnePlus 9 Pro: Fampisehoana, bateria, fampiasa ary maro hafa
Ignacio Sala | 25/03/2021 22:00 | fifaninanana, iPhone 12
Samsung sy Apple dia nanjaka tamin'ny finday avo lenta hatramin'ny nanombohan'ny finday finday avo lenta ny tsena. Nandritra ny taona maro, orinasa maromaro no nanandrana misitrika amin'ity faritra ity nefa tsy mahomby. Ny orinasa farany manandrana mahazo sehatra dia OnePlus, miaraka amin'ny OnePlus 9 Pro.
Ny orinasa koreana LG dia nanandrana nandritra ny taona maro ary ny farany dia eo am-piandohan'ny fanakatonana ny fizarana telefaona (tsy mahita mpividy izy) rehefa very mihoatra ny 4.5000 miliara dolara amin'ity sehatra ity. Hanaraka io lalana io ihany ve ny OnePlus? Ato amin'ity lahatsoratra ity no Ampitahao ny iPhone 12 Pro Max amin'ny OnePlus 9 Pro hijerena raha manana safidy marina ianao.
OnePlus dia manolotra ny smartwatch voalohany: bateria 2 herinandro sy 159 euro
2 Asehoy sy havaozy ny tahan'ny
3 Fahafahana bateria sy fiainana
4 Andiana fakan-tsary
5 Herinaratra, RAM ary fitehirizana
efijery 6.7 santimetatra - 2.778 × 1.284 - famelomana 60 Hz 6.7 santimetatra - 3.215 × 1.440 - famelomana 120 Hz
processeur A14 Bionic Snapdragon 888
Fahatsiarovana RAM 6 GB 8-12 GB LPDDR5
fitehirizana 128-256-512 GB 128-256 GB UFS 3.1
Rafitra fandidiana iOS 14 Android 11 miaraka amin'ny sosona fanaingoana OxygenOS
Fakan-tsary aoriana 12 MP Wide Angle - 12 MP Ultra Wide Angle - Telephoto 12 MP Main sensor 48 MP (Sony) - Sud ambaire 50 MP (Sony) - Telephoto lens 8 MP - Monochrome sensor 2 MP miaraka amin'ny haitao Hasselblad
Fakan-tsary aloha 12 MP 16 MP
bateria 3.687 Mah 4.500 Mah
Conectividad 5G - WiFi 6 - Bluetooth 5.0 - NFC - Jiro 5G - WiFi 6 - Bluetooth 5.2 - NFC - USB-C 3.1
mamoha FaceID Sensorin'ny dian-tànana eo amin'ny efijery
iPhone 12 sy Samsung Galaxy S21, inona avy ireo fahasamihafana ireo?
Asehoy sy havaozy ny tahan'ny
Na dia tsaho nialoha ny fanombohana ny laharana iPhone 12 aza dia nanoro hevitra fa, farany, Apple dia afaka nametraka efijery 120 Hz amin'ity sokajy vaovao ity, indrisy fa tsy toa izany.
Misy terminal maro eny an-tsena misy a mamelombelona ny tahan'ny haavo noho ny faritra iPhone, na 90 na 120 Hz. Ny OnePlus 9Pro vaovao, toy ny Galaxy S21 manontolo, dia ampidiro ny efijery hatramin'ny 120 Hz (azo alamina mba hiasa amin'ny 60 Hz).
Tsiahivina fa Apple no orinasa voalohany natomboka takelaka misy taham-pihavao amin'ny 2017, izay taranaka faharoa an'ny iPad Pro 12,9-inch.
Taham-pahavitrihana avo kokoa ahafahantsika mankafy ny atiny miaraka amin'ny fluide lehibe kokoa, tsy hoe rehefa mamaky, manodina amin'ny pejin-tranonkala na amin'ny boky ihany, fa rehefa milalao lalao ihany koa.
Ny antony tsy mbola nahatratra ny iPhone dia tsy fantatra, fa mety misy ifandraisany amin'ny fanjifana bateria ambony izay ifandraisany.
Izy roa zarao ny haben'ny efijery 6,7-mitovyNa izany aza, toy ny mahazatra ao amin'ny faritra iPhone, eo an-tampon'ny efijery no misy ny notch miaraka amin'ny FaceID, manana habaka lehibe kokoa noho ny fakan-tsary eo alohan'ny OnePlus 9 Pro.
Fahafahana bateria sy fiainana
Ny fanatsarana IOS dia namela an'i Apple hatrany racan amin'ny fahaizan'ny bateria. Raha tsy ny zava-misy fa ny Apple dia mamolavola ny rafitra fiasa ho an'ny fitaovana manokana, dia mety hanana fahaiza-manao avo kokoa ny batterie iPhone, toy ny tranga eo amin'ny ekosistema Android.
While the iPhone 12 Pro Max, mahatratra ny fahaizan'ny 3.687 Mah, ao amin'ny vaovao OnePlus 9 Pro mahatratra ny 4.500 mAh.
Rehefa mameno ilay fitaovana, Apple mametra ny famerana haingana ny bateria ho 15W. Na izany aza, ny tovolahy ao amin'ny OnePlus dia manolotra fanampiana amin'ny famahanana haingana ny tariby hatramin'ny 65W ary hatramin'ny 50W (tsy misy izany raha tsy misy charger manokana izay amidy tsy miankina).
Amin'ity horonantsary etsy ambony ity dia hitantsika ny fomba OnePlus 9 Pro dia mandresy ny fitaovana rehetra Ampitahao amin'izany izy: Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 +, iPhone 12 Pro Max ary iPhone 12 na amin'ny ora fitaterana na amin'ny famerenana ny horonantsary YouTube sy amin'ny lalao 3D.
Ny fihenan'ny bateria dia miadana kokoa, hafanana kely kokoa no hateraka mandritra ny fizotrany, Ka rehefa ela ny ela dia haharitra ela kokoa noho ny hoe ny vidin'ny finday avo lenta ao anaty 30 minitra na latsaka isan'andro, fiampangana haingana izay mety ho tonga amin'ny fotoana mety indrindra mandritra ny androm-piainan'ilay fitaovana.
Miaraka amin'ny fanombohana ny iPhone 11, Apple dia nanolotra fakantsary telo ho an'ny laharana iPhone voalohany: Zoro midadasika, zoro somary malalaka ary telefaona, samy solomaso 12 MP avokoa. Miaraka amin'ny iPhone 12 Pro Max, Apple dia nitazona ny habetsany tamin'ny alàlan'ny fanatsarana ny rindrambaiko fanodinana ary nanampy sensor iray LiDAR.
Hetsika hanandrana hanatsara ny kalitaon'ny sarinao (tadidio fa ao amin'ny faritra fakantsary dia tsy mbola nahalala ny fomba hanaovana ny enti-modiny io mpanamboatra io), nisafidy ny OnePlus 9 Pro ho an'ny fakantsary telo izy: 48 MP sensor lehibe, zoro 50 MP, (samy novokarin'i Sony), telephoto lens an'ny 8 MP sy sensor monochrome 2 MP.
Mba hanonerana izany tsy fahampiana izany, ny OnePlus dia niara-niasa tamin'i Hasselblad tamin'ny fampivoarana ny rindrambaiko sy ny fanamafisana ny sensor, na izany aza, ny fitsapana voalohany dia manondro fa Tsy dia misy mahasamihafa azy raha oharina amin'ireo modely teo aloha.
Herinaratra, RAM ary fitehirizana
Raha miresaka momba ny processeur isika dia tsy maintsy miresaka A14 Bionic avy amin'ny iPhone 12 Pro Max (izay hita ihany koa ao amin'ny faritra iPhone 12 manontolo) sy ny Qualcomm Snapdragon 888, processeur izay hitantsika ao amin'ny OnePlus 9 Pro.
Ao amin'ny fampiharana benchmark ampiasaina handrefesana ny fahombiazan'ny processeur, Geekbench, ny iPhone 12 Pro Max miaraka amin'ny 6 GB RAM, dia mahazo isa Isa 1.614 amin'ny fitsapana fikirakirana tokana. ny OnePlus 9 Pro, mijanona amin'ny 1.105 fotsiny amin'ny fitsapana mitovy amin'ilay maodely 12 GB RAM.
Ao amin'ny fanandramana miasa miaraka amin'ny cores rehetra, Geekbench dia manome ny iPhone 12 Pro Max a isa 4.148 isa ho an'ireo isa 3.603 voarain'ny OnePlus 9 Pro (Maodely RAM 12GB) miaraka amina processeur matanjaka indrindra amin'izao fotoana izao eny an-tsena avy amin'ny Qualcomm.
Mikasika ireo safidy fitahirizana, raha Apple manolotra safidy 3 ho antsika: 128GB, 256GB, ary 512GB, ny OnePlus 9 Pro dia voafetra ho 128GB sy 256GB.
Raha miresaka RAM isika, Apple dia manana fikirakirana tokana 6 GB RAM ho an'ny iPhone 12 Pro Max, raha ny filazan'ny Aziatika OnePlus dia manome maodely roa miaraka amin'ny 8 sy 12 GB an'ny karazana RAM LPDDR5.
Hatramin'ny nanombohan'ny Apple ny rafitra fanekena ny tarehy FaceID, orinasa maro no nanandrana naka tahaka ilay rafitra, fa tsy nisy nahita fahombiazana.
Ny maodely OnePlus farany teo no fitsapana farany farany, satria manome antsika a sensor sensor eo ambanin'ny efijery sy rafitra fanidiana tarehy 2D (FaceID dia 3D), hahafahantsika mamoha azy amin'ny saripika rehetra.
Betsaka ny mpampiasa manamafy fa samy Samsung na Apple manolotra fantsona mitovy amin'ny fifaninanana amin'ny vidiny lafo kokoa, zavatra azo lavina.
Na izany aza, tsy misy mpanamboatra hafa manolotra fanavaozana an-taonany maro (Samsung manolotra fanavaozana Android 3 taona sy fanavaozana ny fiarovana 4 taona) raha Apple fanavaozana hatramin'ny 5 taona.
Ankoatra izany, tsy misy mpanamboatra hafa manolotra ekosistema mifandray miaraka amin'ireo fitaovana hafa, na takelaka, rindrambaiko na solosaina toa ilay atolotry ny orinasa roa tonta.
Raha manome lanja ny fampidirana atolotry ny Apple ianao ary Samsung ary ny fahafaha-manaony izay ampanaovina isan'andro, ny vidiny avo kokoa dia voamarina ho azy. Mazava ho azy, amin'ny tranga 12 GB iPhone 512 Pro Max, tsy voafehy ny vidiny, na dia zavatra efa ampiasain'ny Apple ato amin'ity fizarana ity aza isika.
128 GB 1.221 euro amin'ny Amazon 909 euros
256 GB 1.299 euro amin'ny Amazon 999 euros
512 GB 1.573 euro amin'ny Amazon tsy azo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 12 » iPhone 12 Pro Max vs OnePlus 9 Pro: Fampisehoana, bateria, fampiasa ary maro hafa
Novakiako fotsiny fa ny zava-drehetra dia ambony noho ny plus plus! Toy ny misy azy ireo izao! Batterie bebe kokoa, famelombelona efijery tsara kokoa, ondrilahy bebe kokoa, sns.
Ahoana ny fomba hampandrenesana azy amin'ny iPhone rehefa voampanga ny Apple Watch
Ny AirPod vaovao dia hapetraka amin'ny telovolana fahatelo ary manomboka ny famokarany